Dowladda Federalka oo tababar ku celineysa ciidamada Booliska iyo Isbadal cusub oo ku socda amniga Muqdisho – Somali Top News
Dowladda Federalka oo tababar ku celineysa ciidamada Booliska iyo Isbadal cusub oo ku socda amniga Muqdisho
Wararka amniga Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya ku saabsan ayaa sheegayo in gebi ahaanba ciidamadii laga qaaday Isgoysyadii dhawaan la dhigay.
Isgoysyadii ay Ciidamada Booliska ka joogeyn Magaalada Muqdisho ayaa haawanayo kadib ku dhawaad 20 Maalin oo ay ku sugnayeen halkaas, inkastoo meelaha qaar lagu arkayo balse uu qorshaha yahay in laga qaado
Waxaa u xirnaa inta badan jidadka Muqdisho, waxayna taas keentay culeys farabadan oo dhanka shacabka ah sidoo kalana waxaa dhacay inta ay jidadka u xirnaayeen Rabshado ka dhashay darawalada Bajaajyada ee la dilay.
Sida ay xogo kala duwan sheegayaan ciidamadaan oo tiradooda gaarayo illaa kun Askari ayaa waxaa lagu xareeyey Xerada Iskuul Boolisiyo ee Magaalada Muqdisho.
Sida qorshaha yahay seddex maalin ee soo socoto ayaa Ciidamadaas loo qaadi doonaan dalka Jabuuti si loo soo siiyo tababar dhanka Booliska ah maadaama aysan markii hore helin tababar ku filan iyagoo kaliya soo qaatay Tababar ku siman 3 Bil, waana Ciidamadii lagu aasaasay Taliska Booliska ee uu hoggaamiyo Saadaq Joon.
Ciidamadaan ayaa Magaalada Muqdisho geliyey jah wareer amni iyo mid siyaasadeed, waxaana Magaalada ka dhacay dilal ay ciidamadaan geysteen iyo banaanbaxyo looga cabanayey.
Tallaabadaan ayaa ah mid lagu yareenayo culeyska Dowladda uga imaaday Ciidamadaan Shacabka ula dhaqmayey si aan waafaqsaneyn dhaqanka Ciidamada Booliska oo loogu talagalay inay badbaadiyeen dhiigga Shacabka.
Isgoyska qaar ayaa lagu arkayaa ciidamo yar oo lagu talagalay inay Baabuurta baaraan inta kuwa kale looga wareejinayo.
← Safaarada Norway ee Soomaaliya oo beenisay balan qaad Viso been abuur ah
Taliska Booliska Soomaaliyeed oo ka warbixiyay howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada amniga →
Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo gaaray magaalada Jowhar
Guddiga Doorashooyinka Qaranka Oo Shahaadooyin Ku Meel Gaar Ah Gudoonsiiyay Shan Xisbi
Beesha Caalamka oo Soomaaliya ka taagerysa dib u eegista Dastuurka dalka